२०११ को विश्वकप फाइनल बिक्री गरिएको हो ! - Nepal Cricket
२०११ को विश्वकप फाइनल बिक्री गरिएको हो !
श्रीलंकाका पूर्व खेलाडी अर्जुन रणतुंगापछि श्रीलंकन पूर्व खेल मन्त्री महिदानन्दा अलुथगानाले सन् २०११ को विश्वकपको फाइनलमा फिक्सिङ भएको बताएका छन । उनले भारतले त्यो विश्वकपको फाइनल जित्ने पहिले नै फिक्स भएको बताए ।
अलुथगानाले त्यो बेला आफु खेल मन्त्री भएको भएपनि फिक्स भएको विश्वास नलागेको बताए । तत्कालिन कप्तान कुमार संगाकार र महेला जयबर्दनेले पूर्व मन्त्रीसँग फाइनल फिक्स भएको भन्ने प्रमाण मागेका छन ।
जयबर्दनेले ट्विट गर्दै निर्वाचन नजिक आएका बेला यो प्रचारवादी रणनिती भएको बताएका छन । जसले आरोप लगायो उसले सपुत माग्नु पर्ने बताए । अलुथगाना सन् २०१० देखि २०१५ सम्म खेल मन्त्री रहेका थिए । अहिले उनी उर्जा मन्त्री छन । उनले श्रीलंकाको एक टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन ।
उनले यो चक्रका बारेमा त्यो बेला केहि भन्न नचाहेको तर अब भन्ने बेला आएको बताए । यसअघि रणतुंगाले पनि २०११ को फाइनल फिक्स भएको बताएका थिए । फाइनल जुन तरिकाले टिम हारेको थियो, त्यो संकास्पद रहेको बताएका थिए ।